Galaaskee ayaa ka kooban biyaha ugu badan? Kaliya indheer garadyada ayaa awoodi doona inay helaan jawaabta halxiraalahan - SANTE PLUS MAG - TELES RELAY
Galaaskee ayaa ka kooban biyaha ugu badan? Kaliya indheer garadyada ayaa awoodi doona inay helaan jawaabta halxiraalahan - SANTE PLUS MAG
Deeqa xali halxiraalahan, waxaad awoodi kartaa inaad isticmaasho koorsooyinki hore ee sayniska ee dugsiga sare kaas oo kahadlaya mugga, dareerayaasha iyo adkaha. Halxiraalahan ayaa tijaabin doona aqoontaada cilmiga ah.
Sidaa darteed waxaa lagugula talinayaa inaad sifiican ugu fiirsato sawirka iyo gaar ahaan inaan lagu kadsoomin muuqaalada. Waa su'aal ah helitaanka muraayadda oo ay ku jiri lahaayeen biyaha ugu badan afarta.
Ku hel muraayadda biyaha ugu badan. Xigasho: Theepochtimes
Si fiican uga fikir su aasha oo ha ku degdegin inaad ka jawaabto su'aasha. Wixii intaa ka dambeeya, hoos u deg si aad u aragto jawaabta. Waa inaad racfaan ka qaadataa caqliga si aad u heli karto jawaabta saxda ah ee halxiraalaha ah.
Waa tan jawaabta
Sharciga buoyancy ayaa soo galaya ciyaarta waana dhalada 4 in cleeyihiin biyaha ugu badan.
Jawaabta halxiraalaha. Xigasho: thypochtimes
Alaabta lagu ciyaaro shinbiraha caaggu kuma dhex jirin dhalada laakiin si fiican ayay uga dambeeyaan. Intaa waxaa dheer, waa inaad ogaataa in duck caagga ah ma quusin karo inay horseed noqoto mooyee; anigawaxay awoodi doontaa oo kaliya inay sabeyso.
Duck ayaa sabayn kara oo keliya. Xigasho: thypochtimes
Haddii aad jeceshahay halxiraalaha noocan ah, halkan waa mid kale oo adiga kugu habboon imtixaanka sirdoonka taas oo ku lug leh qiyaasida koobabka la buuxin doono marka hore.
Maqaalkani wuxuu u muuqday markii hore https://www.santeplusmag.com/quel-verre-contient-le-plus-deau-seules-les-genies-pourront-trouver-la-reponse-a-cette-enigme/
TELES RELAY 40667 posts 1 comments
Moulay Hafid Elalamy “project bank”, utopia mise kacaankii warshadaha? - Dhalinta Afrika
Madrid Real Madrid y Barcelona se ríen de los ESPAÑOLES 💥 (in ka badan 175 milyan) - Video